हर्निया भनेको के हो ? यसकाे लक्षण र उपचार जानिराखाैँ « गोर्खाली खबर डटकम
यसलाई औषधीले काम गर्दैन । पीडा हुँदा पेन किलरको रुपमा प्यारासिटामोल खान सक्नुहुन्छ । धेरै नै दुख्यो भने ट्रामडल (Tramedol) खान सक्नुहुन्छ । तर पेनकिलरको प्रयोग निकै कम मात्रामा गर्नुपर्छ र कुनै पनि औषधी खानुपुर्व डाक्टरको सल्लाह लिनुहोस् । पीडाबाट छुटकारा पाउनका लागि हट वाटर ब्यागले सेक्नुहोस् । यसले मांसपेशी रिल्याक्स हुन्छ र पीडा पनि कम हुन्छ ।
पित्ताशयमा पत्थरीको समस्या धेरैलाई हुने गर्छ । प्रत्येक दश मध्ये एक व्यक्तिमा देखिने यो आम समस्या हो । त्यसैले पित्ताशयमा पत्थरी हुँदैमा आत्तिहाल्नु पर्दैन । तर कतिपय व्यक्ति यस्ता पनि छन्, जो पित्ताशयमा पत्थरी भएपछि खानपानलाई लिएर चिन्तित हुने गर्छन् । उनीहरु सोच्छन्, पित्ताशयमा पत्थरी भएपछि शल्यक्रिया गर्नु पर्छ । र , शल्यक्रिया पश्चात्त खानपानमा सावधानी अपनाउनु पर्छ ।
वोसो रहित कम वोसोयुक्त पदार्थ खाने ।
आहारमा घुलनशील फाइबरयुक्त खानेकुराको सेवन गर्ने । अत्याधिक फाइबर भएका खानेकुराले पनि पेटमा ग्यास बढाउन सक्छ ।
थोरै थोरै तर धेरै पटक खाने प्रयास गर्ने । खानामा प्रोटिनको सेवन कम गर्ने । वोसो रहित दूग्धजन्य पदार्थका साथमा फलफूल, साजसब्जी तथा अन्नको सेवन गर्ने ।
मसेलार, चिल्लो पदार्थ, कैफिन, दूग्ध जन्य पदार्थ, फाइबर रहित आहार तथा गुलियोबाट परेज गर्ने ।
मुखमा अमिलो पानी आउने, छाती तथा घाँटी पोल्ने समस्या हुनेहरुले एकचोटी अवश्य पढ्नुहोला !
डिभोर्स गर्दा ऋतिकले दिएका थिए यति मोटो रकम, कति पाएकि थिइन् करिश्माले ?
२० बर्षिया युवतीले छोरालाइ जन्म दिएपछि मेरो बच्चा होइन भन्दै लान नमानेपछि….